Yakachipa kompositi inosanganisa muchina wezvipfuyo bhiza mupfudze compost Turner
Mombe Manyowa Kompositi Turner
TAGRM M2000 compost michina yakagadzirirwa kugadzirisa kusvika kumakumi mana nemazana mana emamita emamita eicompost paawa zvichienderana nerudzi uye saizi yekutendeuka. Sekutengesa kupisa unozvigadzirira wega muchina wekugadzira muchina muChina, M2000 inogona kuchengetedza mutengo wevashandi wevashandi zana nemakumi mashanu.
Lead Nguva: Mazuva makumi matatu
Type: Kuzvifambisa wega
Kushanda Upamhi: 2000mm
Kushanda Kureba: 800mm
Kushanda Unyanzvi: 430m³ / h
Nezve The Livestock Breeding
Nekukurumidza kukura kwekukura kwakakura, huwandu hwakawanda hwetsvina yemombe yemombe inonetsa kubata nayo. Sekureva kweChina Ministry of Agriculture, China inogadzira angangoita mabhiriyoni mana matani emarara emhuka gore rega.
Mangani maKGS emupfudze mhuka inogona kuita ZUVA?
Mazano a TAGRM
TAGRM'S Compost Kusanganisa Machine inogona otomatiki kupedzisa shanduka, kusanganisa, kusanganisa, kupwanya uye oxygenate iyo composting zvinhu senge zvipfuyo nehuku manyowa, uye pfapfaidzo system inogona kuwedzera mvura uye kuvirisa kune iyo composting zvinhu. Nhasi,TAGRM 's Kompositi Inoshandura Mushini yakashandiswa zvinobudirira kune nyika dzinopfuura zana senge Russia, Brazil, Ecuador, Malaysia, Kuwait, Jordan, Argentina, Indonesia, nezvimwewo, pazvipfuyo zvavo nehuku yehuku tsvina tsvina yekushandisa zvirongwa.
Muenzaniso M2000 Ground clearance 130mm H2
Rate Simba 24.05KW, 33PS, Kumanikidzwa kwepasi 0.46Kg / cm²
Rate kumhanya 2200r / min Kushanda upamhi 2000mm W1
Mafuta anoshandiswa 35 235g / KW · h Kushanda kukwirira 800mm Max.
Bhatiri 24V 2 × 12V Chimiro chemurwi Triangle 45 °
Mafuta chinzvimbo 40L Mberi kumhanya L: 0-8m / min H: 0-40m / min
Kutsika vhiri 2350mm W2 Kumhanya kumashure L: 0-8m / min H: 0-40m / min
Wheel base 1400mm L1 Kutendeuka nharaunda 2450mm min
Kukura 2600 × 2140 × 2600mm W3 × L2 × H1 Dhayamita ye roller 580mm Nebanga
Kurema 1500kg Pasina mafuta Kushanda chinzvimbo 430m³ / h Max.
M2000 Kompost Turner Pasina Kabhini
M2000 Compost Turner Nekabhini
Kurongedza uye kutumira
2 seti yeM2000 compost Turner inogona kutakurwa mu20 HQ Chikamu chikuru chemuchina we compost uchazara munzvimbo dzakashama, zvimwe zvikamu zvichazara mubhokisi kana kuchengetedza kwepurasitiki. Kana iwe uine chero zvakakosha zvinodiwa pakurongedza, isu tinorongedza sekukumbira kwako.